जागरण अभियानले कांग्रेस बलियाे पाेजिसनमा पुगेकाे छः युवा नेता महर्जन (अन्तर्वार्ता) - Dainik Nepal
मीनकृष्ण महर्जन, युवा नेता, नेपाली कांग्रेस, ललितपुर २०७६ असार १३ गते ११:४२
नेपाली कांग्रेस ललितपुरका जिल्ला सदस्य समेत रहेका युवा नेता मीनकृष्ण महर्जन प्रदेश सभाको निर्वाचनमा झिनो मतले पराजित भए । महासमिति सदस्य समेत रहेका महर्जनले ललितपुरलाई कांग्रेसको किल्ला बनाउने गरेर अहिलेको कांग्रेस नेतृत्व सक्रिय भएर लागेको बताउँछन् । पार्टी सभापति मदनबहादुर अमात्यलाई साथ दिँदै आएका महर्जनले गुटउपगुट र अन्तर्घात गर्ने साथीहरूलाई पनि मूलधारमा ल्याएर कांग्रेसको संगठन बनाउनुपर्ने बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसको पकड हुँदाहुँदै पनि आफ्नै पार्टीका साथीहरूका कारण पारजित हुन पुगेका महर्जनले पार्टीलाई सुदृढीकरण गरेर लैजानुपर्ने मत राख्छन् ।
उनले युवापुस्तालाई पार्टीमा धेरैभन्दा धेरै स्थान दिनुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्रिय जागरण अभियानबाट उत्साहित भएको बताउँदै आएका महर्जन कराते खेलमा साफ गेमका गोल्ड मेडलिस्ट हुन् । उनी अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री पनि हुन् । नेपाली कांग्रेसको संगठन निर्माणका साथै कराते खेलको विकास र खेलाडीहरूको क्षमता वृद्धिमा उनी सधै सक्रिय हुने गरेका छन् । ललितपुर कांग्रेसभित्र युवा पुस्तामा लोकप्रिय मानिने महर्जन गोदावरी नगरपालिकाको चापागाउँका स्थानीयबासिन्दा हुन् । हालैसम्पन्न भएको नेपाली कांग्रेसको एक महिने जागरण अभियानका बारेमा युवा नेता मीनकृष्ण महर्जनसँग हाम्रा सहकर्मीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति ललितपुरले रोडम्याप बनायो । कार्यक्रमहरूको सूची बनायौं । पार्टीम शुद्धीकरण ल्याउनु प¥यो । कम्युनिस्टहरूको दुईतिहाइको दम्भ छ त्योसँग लड्न पनि एक हुनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ । तानाशाही अधिनायकवादी सरकारको ज्यादती दिनदिनै बढ्दै गएको छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा विकास निर्माणदेखि असरमा भेदभाव गर्ने कार्यबाट जनता पीडित भएका छन् । कम्युनिस्टहरूलाई नै भोट दिने जनताहरू दिक्क भएका छन् । त्यसलाई नेपाली कांग्रेसले क्यास गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ । नेपाली कांग्रेसले यसलाई रोडम्याप बनाएर लैजानुपर्छ । जनताको मन जित्नुपर्छ भनेर सुझाव र सरसल्लाह दिएका छौँ । पार्टीभित्र पनि गुटबन्दी छ । गुटबन्दी मौलाएको छ । गुटबन्दीको अन्त्य गर्नु पर्‍यो । तेरो र मेरो मान्छे नभनेर पार्टीलाई मजबुत बनाउनका लागि सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरू एकढिक्का हुनु प¥यो । यी सबै समस्या समाधानका लागि मसिनो गरेर सुझाव दिएका छौँ ।
मैले पहिला पनि भने ललितपुरमा कांग्रेस कमजोर होइन । कमजोर बनाइएको हो । केही ठूला भनाउँदा अन्तर्घाती नेताहरूले कांग्रेसलाई कमजोर बनाएका हुन् । हामीले अब त्यो हुन दिँदैनौँ । जागरण अभियानका क्रममा युवाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रह्यो । पार्टी सभापति मदनबहादुर अमात्य आफै भिड्नु भयो । केन्द्रीय प्रतिनिधि सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि कार्यक्रमहरू राख्न हौसला दिनुभयो । जति पनि कार्यक्रमहरू भए एक महिनाको दौरानमा ती सबैमा उल्लेख्य कार्यकर्ताहरू सहभागी हुनुभएको छ । समापन कार्यक्रममा स्वयं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू नै आफै आउनुभयो ।
पार्टी सभापतिले कारबाही फुकुवा गरेपछि त झन् अर्कै खालको माहौल बन्यो । त्यति मात्रै होइन समापन कार्यक्रममा तत्कालीन नेकपा (एमाले) ललितपुरका प्रभावशाली नेता रामकृष्ण हुमागाइँलाई नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गराउन सफल भयौँ । हाम्रा लागि उपलब्धि पनि हो । नेकपालाई काउन्टर पनि हो । दुई पटक गाविस अध्यक्ष भइसकेको र ०३६ सालदेखि कम्युनिस्ट बनेको व्यक्ति नेपाली कांग्रेसमा भित्रिनुलाई हामीले उच्च मूल्यांकन गरेका छौँ । उहाँ पनि पार्टीमा लागेर दुःख पाएको व्यक्ति हो । ठूलो योगदान गर्नुभएको व्यक्ति नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्दा हामीलाई फाइदा भएको छ । कम्युनिस्टहरूलाई ठूलो धक्का लागेको छ ।
योपनि गलत कुरा हो । हाम्रो ललिपुर क्षेत्र नं. १ भनेको दोस्रो कर्णालीको रुपमा लिने गरिन्छ । मकवानपुर, काभ्रे र सिन्धुलीसँग जोडिएको छ । केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई लगेर त्यस्ता दुर्गम गाउँहरूमा गएर कार्यक्रम पनि गरेका छौँ । २ र ३ क्षेत्र एक दिनमा पूरै घुम्न सकिन्छ । भौगोलिक हिसावले १ नं. क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू गर्न केही कठिनाइ छ । प्रत्येक गाउँ र क्षेत्र, गाउँपालिका र नगरपालिकामा हाम्रा केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई लगेर कार्यक्रम गरेका छौँ । बाहिर आएका हल्लाको पछाडि नलाग्नुस् । केन्द्रीय प्रतिनिधिज्यूलाई सोधे पनि हुन्छ ।
पार्टी कमजोर भइरहेको अवस्थामा पार्टीलाई बलियो बनाउने चुनौती पनि हामीलाई छ । अहिले हामी मिलेर जानुपर्ने समय हो । दुईतिहाइको कम्युनिस्टहरूको दब्दवा रहेको अवस्था छ । कम्युनिस्टहरूको अधिनायकवाद, भ्रष्टाचार मौलाएको, कानूनी व्यवस्थाको उपहास भएको, तस्करी बढेको कारणले गर्दा अब नेपाली कांग्रेस मिलेर देशको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्छ । देशमा समृद्धि र विकास गर्ने भनेको कांग्रेसले नै हो । यस्तो अवस्थामा स–साना कुरा र मतभेदहरूलाई भुलेर जानुपर्छ भन्ने सोँचका साथ भनेर कारबाही फिर्ता भएको हो । हामी जुध्नु हुँदैन, मिलेर जानुपर्छ, एकताको सन्देश दिनुपर्छ, मिलेर जानुपर्छ भनेर लागेका हौँ । हिजोका दिनमा जतिलाई कारबाही गरिएको छ कारबाही फिर्ता गरेर उनीहरूलाई सँगै लिएर गई विवाद अन्त्य गरेका हौँ ।
कांग्रेसको संगठन ललितपुरमा राम्रो छ । कांग्रेसले जित्ने यथेस्ट सम्भावना हुँदा हुँदै पनि हामी हा¥यौँ । ०७४ सालमा भएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा ललितपुर जिल्लामा विशेष गरी ललितपुर जिल्लाका पार्टी सभापति पूर्वमाननीय मदनबहादुर अमात्यज्यूलाई ठूलो अन्तर्घात भयो । उहाँलाई ठूलो शक्ति नै लाग्यो । स्वयम् पार्टीमा एउटा ईतिहाँस बोकेको, १४ वर्षकै उमेरमा राजा महेन्द्रलाई विराटनगरमा बम हान्नलाई बम बोकेको मान्छे, कलिलै उमेरमा जेल जीवन विताउनु भएको नेता, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रका लागि ठूलो संघर्ष गरेको तथा पूर्वमन्त्री ओमकारप्रसाद श्रेष्ठले खुलेरै पार्टी सभापति मदनबहादुर अमात्यलाई हराउन लाग्नुभयो ।
ओमकारप्रसाद श्रेष्ठको टिम छ । एउटा गिरोह नै छ । ओमकारप्रसाद श्रेष्ठले तत्कालीन माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार पम्फा भुसालसँग पटक पटक मिटिङ गरेर उहाँकै पैसा ल्याएर कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन पैसा बाँड्ने काम गर्नुभयो । मदनबहादुर अमात्यका विरुद्ध पर्चा पम्प्लेट बाँड्ने काम भयो । पार्टीलाई कमजोर बनाउने काम गरे । उहाँहरूलाई कारबाहीको सिफारिस पनि गरियो । म प्रदेश सभा १ ‘ख’ र उदयशम्शेर राणा क्षेत्र नं. १ मा उम्मेदवारी दिएको क्षेत्रमा पनि अन्तर्घात भयो । हामीलाई पनि एउटा गिरोह लाग्यो । क्षेत्र नं. १ का नेपाली कांग्रेसका नेता हुँ भन्नेहरूले हराउन भूमिका खेले ।
होइन भ्रातृ संगठनहरू सक्रिय नै छन् । उनीहरूको साथ र सहयोग नभएको भए जारण अभियान सफल हुने थिएन । बरु नेविसंघ ललितपुरमा अलिकति कमजोर नै छ । तरुण दलको केन्द्रीय अध्यक्ष जितजंग बस्नेतजी हाम्रै ललितपुरको हुनुहुन्छ । उहाँ त्यत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ । ललितपुर क्षेत्र नं. १ मा ६–६ महिनामा तरुण दलले कार्यक्रम गर्दै आएको छ । बरु नेविसंघभित्र विवाद छ । नेविसंघको अध्यक्ष राजनीतिक व्यक्ति हुनुहुन्न । नेविसंघका लागि मथुरा शर्मा उपयुक्त व्यक्ति हो । उहाँ अलिकति राजनीतिक व्यक्ति पनि हो । मथुराजी विद्यार्थी राजनीतिबाट आउनु भएको छ । उहाँलाई काम गर्न दिइएको छैन । नेपाल महिला संघ सक्रिय छ । महिला संघको नेतृ मुना अधिकारी स्वयं नै गोदावरी नगरपालिकाको उपमेयर हुनुहुन्छ । उहाँ जागरण अभियानको कार्यक्रममा आफै खटिनु भएको छ । नेपाल दलित संघ पनि सक्रिय छ । नेविसंघको विवाद मिलाउने भनेर स्वयं सभापति मदनबहादुर अमात्यले नै भन्नुभएको छ । यो विवाद अन्त्य हुन्छ ।
हो म आदरणीय नेता खुमबहादुर खड्क निकट नै थिएँ । म खुमबहादुर दाइँसँग ०५२ सालतिर निकट हुन पाएको हुँ । मलाई नेपाली कांग्रेस हाल केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्ववन मन्त्री शंकर भण्डारी दाईले लगेर चिनाउनु भएको हो । मेरो खेल जीवनको बारेमा र राजनीतिक जीवनको बारेमा शंकर भण्डारी दाईले खुमबहादुर दाईलाई सुनाउनु भयो । खुमबहादुर दाईले भन्नु भयो, मेरो टीममा बसेर काम गर्नु म तपाईलाई नेता बनाउँछु भन्नु भयो । खुमबहादुर दाईको कुराले उहाँप्रति निकै प्रभावित भएँ । उहाँसँग नजिक भएँ । मैले धेरै नेताहरूको नजिक भएर पार्टी संगठनको निम्ति काम गरेँ । उहाँ जत्तिको नेता कार्यकर्तालाई माया गर्ने नेता मैले देखिन ।
उहाँले त यतिसम्म भन्नु हुन्थ्यो कि मीनकृष्णजी तपाईलाई मन्त्री बनाएर मात्र म यो धर्तीबाट विश्राम लिन्छु भन्नु हुन्थ्यो । उहाँ कै विशेष पहलमा मैले गएको प्रदेश सभा निर्वाचन नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार हुने मौका पाएँ । मभन्दा सिनियर नेता पनि थिए । तर उहाँलाई कुन क्षेत्रमा कसलाई टिकट दिँदा चुनाव जित्छ त्यो खुमबहादुर दाईलाई कन्ठै हुन्छ । मलाई अचम्म के लाग्छ भने खुमबहादुर दाईलाई जुनसुकै निर्वाचन क्षेत्र होस् त्यो क्षेत्रको नेताको नाम थाहा हुन्थ्यो । क्षेत्रमा कसको कति प्रभाव छ ? त्यो उहाँलाई थाहा हुन्थ्यो । आज नेपाली कांग्रेस पार्टी कमजोर अवस्थामा छ । कार्यकर्ताहरू खुमबहादुर खड्का जस्तो महान नेताको खोजीमा छन् । साँच्चै भन्नु पर्दा उहाँको स्वर्गारोहणपछि एक्लो भएको छु ।
धेरै थाहा छ । ०६५–६६ सालको कुरा हो । एकदिन गिरिजा बाबुले खुमबहादुर दाईलाई बोलाउनु भएछ । खुमबहादुरजी तपाईले मलाई सहयोग गर्नु पर्‍यो भन्नु भएछ । खुमबहादुर दाईले भैहाल्छनी गिरिजाबाबु पहिले पनि मैले हजुरलाई सहयोग गरेकै हो हजुरले नै मलाई टाढा राखेको हो मैले के सहयोग गर्नु पर्‍यो भन्नुस् म सहयोग गर्न तयार छु । अनि गिरिजाबाबुले भन्नु भएछ, मेरो छोरी सुजातालाई नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा पठाउनु पर्‍यो तपाईले सहयोग गर्नुपर्‍यो भन्नु भएछ । अनि खुमबहादुर दाईले भैहाल्छ्नी गिरिजाबाबु म सहयोग गर्न तयार छु भन्नु भएछ । अनि खुमबहादुर दाईले गिरिजाबाबुसँग एउटा प्रस्ताव राख्नु भएछ ।
मलाई कांग्रेसको महामन्त्री बनाउनुस् म तपाईंको छोरीलाई सहयोग गर्न तयार छु, भन्नु भएछ, अनि गिरिजाबाबुले म तपाईलाई महामन्त्री पनि बनाउँछु गृहमन्त्री पनि बनाउँछु भन्नु भएछ, अनि खुमबहादुर दाई जवाफ दिनु भएछ गिरिजाबाबु म गृहमन्त्री हुन्न सुजाताको नेतृत्वमा म कसरी गृहमन्त्री हुन जाने ? म ०३३ मै तपाईं कै दाजु वीपी कोइरालाको पालाको केन्द्रीय सदस्य भैसकेको व्यक्ति हो भन्नु भए छ । अनि गिरिजाबाबुले भन्न भएछ, मेरो छोरीलाई मन्त्रालयको ज्ञान छैन । चलाउने तपाईले नै हो भन्न भएछ । गिरिजाबाबुले कर गरेपछि खुमबहादुर दाईले नाई भन्न सक्नु भएन । खुमबहादुर दाई गृहमन्त्री हुन राजी हुनु भयो, त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री माधव नेपाल हुनु हुन्थ्यो ।
उपत्यकाका नेवारहरुलाई खासै राजनीतिमा चासो राख्दैन । नेवारहरू आ–आफ्नो व्यापार व्यवसायमा व्यस्त हुन्छन् । यो सरकरले गुठीमाथि धावा बोलेर ठूलो गल्ती ग¥यो । अहिलेको सरकार गुठी बिधेयक फिर्ता लिएको छ । फिर्ता भनेर हुँदैन, खारेज नै गर्नुपर्छ । नत्र यिनीहरूको आफ्नो अनुकूल मिल्ने बितिक्कै फेरि गुठी बिधेयक ल्याउँछन् ।